Logos Library | BETSIMITATATRA ... about logos
Title: BETSIMITATATRA ... Author:NOSORATAN
Number of words for page: BETSIMITATATRA ... (M.A.)
Harivariva antanin''olona izato izy ka faly sahirana! Lavi-podiana tokoa a!
Etsy ange misariha akalana dia manatona an''i Nenibe e. Ndeha isika mianaka hitety ny havoanan''i Betsimitatatra mody masoandro fa tsy ho ela ianao dia hanainga hiampita ranomasina lavitra any indray. Tsia, tsy hivezivezy lavitra ho aiza akory re isika e . Ny maso no hanesy ny fara-vodilanitra manoloana ka adalan''izay tsy mankafy. Mahafinaritra o? Misava tsy nahy ny havesatrin''ny saina mibanjina an''i Betsimitatatra. Vohitsara sa Voromahery?
Endrey ireto tanimbary midadasika! Sangisangian''ny tara-masoandro efa mihilana ka mandray tentina marevaka miofohofo hatrany. Manakoako koa moa ny feon''ny ankizy manao fanenjika sy miventy "Tao-katsaka tanim-parihy..." etsy Ambanin'' Ampamarinana.
Eo ary, itsy farany atsimo tazantsika, tendrombohitra mitomandavana sy manerinerina : io no Ankaratra. Manjavozavo lalandava. Lavitra akaiky mahamanina hoy ny tononkalo. Midona malefaka mampahory hoy ny hira.
Io antehezan-kavoana kosa, saloran'' ny ala maitso matevina, io Antsahadinta, vohitr''Andriana. Efa nozahantsika io tamin'' ny ianareo mbola kely. Nihanika an-tongotra teo antsinanan'' ilay lohasaha maintso mivalona eo avara-tanàna isika. Tsaroanao ilay vonin-draozy nanintona ahy teo an-tokonana?
Itsy kosa i Soavina ary ao atsimotsimo ao no misy ny tanindrazantsika, Ankadivoribe. Fantatrao moa fa tsy ampy indray mahamasa-bary avy eo amin'' ny fasana no misy an''Ambohimasimbola, nipoiran''ny mpanjakan''ny Merina? Malaza noho izany iny Vakinisisaony iny. Jereo iry renirano miolakolana miantsinanana mamonjy an''Ikopa. Io tandrify azy andrefana io i Vontovorona. Io atsimo kelin''ilay dongona hafa kely io. Toy ny mofo mamy hoy ianareo taloha. Eny anie hono no hanaovana izany "Tanambao" e. Efa mba ho vita kosa angamba izany rehefa mody ianareo efa-mianaka rahatrizay.
Rehefa faran''ny taona toy izao, dia eny amin''iny faritra iny no milentika ny masoandro. Mampirenty ny endriny tsara indrindra izy amin''izay ka miova arakarakin''ny fivangongon''ny rahona. Velariny amin''izany ny taratra mivolo-mena ...